iPhone Yakaramba Pane Apple Logo? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
netflix ipad app isiri kushanda
wifi yangu haisi kushanda pane yangu iphone
hulu isiri kushanda pa iphone
iphone yangu haibhadhare
iPhone Yakaramba Pane Apple Logo? Heino Chaicho Kugadzirisa.
Zvese zvaive zvakanaka kusvikira yako iPhone yatanga patsva uye yakanamatira pane Apple logo. Iwe waifunga, 'Pamwe zviri kungotora nguva ino,' asi nekukurumidza wakaona kuti chimwe chinhu chakange chisina kumira zvakanaka. Wakaedza kumisazve iwe iPhone, kuiisa mukati mekombuta yako, uye hapana chinoshanda. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone yakanamatira pane Apple logo uye kunyatso gadzirisa sei.
Ndiri A Aimbova Apple Tech. Hechino Chokwadi:
Pane ruzivo rwakawanda pamusoro penyaya iyi kunze uko, uye imhaka yekuti iri dambudziko rakajairika. Zvese zvimwe zvinyorwa zvandakaona zvingave zvisiri izvo kana kuti zvisina kukwana.
Sekugadzirwa kweApple, ini ndine ruzivo rwekutanga kushanda nemazana ePhones, uye ndinoziva kuti iPhones dzinonamira paApple logo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Kuziva nei yako iPhone yakanamatira paApple logo munzvimbo yekutanga kunobatsira iwe kudzivirira kuti zvirege kuitika zvakare.
iphone skrini haina kupindura pakubata
Dzvanya apa kana iwe uchida kusvetuka chaiko kumagadzirirwo. Ramba uchiverenga kana iwe uchida kudzidza kuti yako iPhone chii chaizvo uchiita painoratidza Apple logo pachiratidziri kuti unzwisise zvakakanganisika.
Tevere, ini ndinokubatsira kuti uone chakakonzera dambudziko pakutanga. Dzimwe nguva zviri pachena, asi yakawanda yenguva hazvisi. Mushure mekunge taziva chakakonzera dambudziko, ini ndinokurudzira nzira yakanaka yekugadzirisa.
Chii Chaizvoizvo Zvinoitika Kana iPhone Yako Ikutendeuka
Funga nezvese zvinhu izvo zvinofanirwa kuitika usati wagadzirira kuenda mangwanani. Unogona kufunga nezvezvinhu zvakaita kugadzira kofi, kugeza, kana kurongedza masikati ebasa, asi iwaya mabasa epamusoro-soro - akaita semapurogiramu pane yako iPhone.
Isu kazhinji hatifungi nezvezvakakosha zvinhu zvinoitika kutanga, nekuti zvinoita kunge zvinongoitika zvega. Kunyangwe tisati tasimuka pamubhedha, isu tinotambanudza, tinodhonza zvifukidzo, tinogara, uye tinogadzika tsoka dzedu pasi.
IPhone yako haina kunyanya kusiyana. Kana yako iPhone ikatanga, inofanirwa kubatidza processor yayo, kutarisa ndangariro yayo, uye kumisikidza kuuraya kwezvinhu zvemukati isati yagona kuita chero chinhu chakaomarara, sekutarisa email yako kana kumhanyisa maapplication ako. Aya mabasa ekutanga anoitika otomatiki kumashure sezvo yako iPhone inoratidza iyo Apple logo.
Nei iPhone Yangu Yakanamira Pane Iyo Apple Logo?
Yako iPhone yakanamatira paApple logo nekuti chimwe chinhu chakakanganisika panguva yayo yekutanga maitiro. Kusiyana nemunhu, yako iPhone haigone kukumbira rubatsiro, saka inongomira. Vakafa. Apple logo, nekusingaperi.
Zvino kuti iwe unzwisise sei iyo logo yeApple yakanamatira pane yako iPhone, zvinobatsira kutaura dambudziko neimwe nzira: Chimwe chinhu chakashanduka mune yako yekutanga iPhone maitiro uye hazvishande zvekare. Asi chii chakachinja? Zvirongwa hazvina mukana kune yako yekutanga iPhone maitiro, saka haisi mhosva yavo. Heano mikana:
IOS inogadziridza, kudzorera, uye kuwedzeredza data kubva pakombuta yako kuenda kune yako iPhone vane mukana wekushanda kwayo kwepakati, saka ivo unokwanisa kukonzera dambudziko. Chengetedzo software, isina tambo tambo dzeUSB, uye zvisirizvo USB madoko zvinogona kukanganisa maitiro ekufambisa dhata uye kukonzera software huori izvo zvinogona kukonzera iyo Apple logo kuti inamatire pane yako iPhone.
Jailbreaking: Mamwe akawanda mawebhusaiti (uye vamwe vashandi veApple) vanochema, 'Jailbreaker! Ndiri kukushandira zvakanaka! ” pese pavanoona dambudziko iri, asi jailbreaking handiyo chete chinhu chingaite kuti yako iPhone ibatirire paApple Logo. Izvo zvataurwa, mukana wematambudziko wakakwira kana iwe jailbreak yako iPhone . Haisi chete iyo jailbreaking process inoda kudzoreredzwa kwakazara, asi zita rayo rinobva mukuti iro rinotyora maapplication 'kubuda mutirongo', nekupfuura zvidziviriro zveApple uye uchivabvumidza kuti vasvike kune rako rekutanga basa re iPhone. Iyi ndiyo chete mamiriro ezvinhu apo app unokwanisa kukonzera yako iPhone kunamira paApple logo. Psst: Ini ndakapwanya yangu iPhone kare.
Matambudziko eHardware: Isu takatotaura kare kuti yako iPhone inoongorora neayo Hardware sechikamu chekutanga kwayo maitiro. Ngatishandisei Wi-Fi semuenzaniso: Yako iPhone inoti, 'Hei, kadhi reWi-Fi, batidza kanyanga kako!' uye kumirira mhinduro. Kadhi rako reWi-Fi, richangobva kunyura mumvura, haritauri chero chinhu kumashure. Yako iPhone inomirira, uye inomirira, uye inomirira… uye inoramba yakanamatira pane iyo Apple logo, zvachose.
Yako antivirus software inopinda ndokuti, 'Mira! Ndinofanira kukuongorora! ” uye inokanganisa kuendesa data. iTunes inobvisa iyo yekuvandudza, uye yako iPhone inosara hafu-yakagadziridzwa uye isingagone zvachose. Kazhinji, yako iPhone inokanda mune yekudzoreredza modhi uye inoratidza 'Unganidza kune iTunes', asi dzimwe nguva inonamira pane iyo Apple logo.
Kana yako iPhone yakanamatira paApple logo mushure mekunge washandisa iTunes kugadzirisa, kudzoreredza, kana kuendesa data kune yako iPhone, iwe unofanirwa kudzima kwenguva pfupi software yakakonzera dambudziko usati waenderera. Kuti udzidze zvakawanda nezvematambudziko anogona kuitika pakati peTunes uye imwe software, tarisa chinyorwa chaApple nezve maitiro gadzirisa nyaya pakati peTunes neyechitatu-bato chengetedzo software . Dambudziko rinowanzoitika paPC, asi data rekuchinjisa nyaya unokwanisa kuitika paMacs futi.
3. Tarisa Yako USB Cable uye USB Port
Tambo dzakakundikana dze USB uye madoko e USB paPC nemaMacs zvinogona kukanganisa kufambiswa kwedata uye kukanganisa software yako ye iPhone. Kana iwe wakambove nematambudziko munguva yakapfuura, edza rakasiyana tambo kana batanidza yako iPhone kune rakasiyana USB chiteshi. Kana iwe usingakwanise kuziva kuti chii chakashata nePC yako, dzimwe nguva zviri nyore kushandisa komputa yeshamwari kana iwe uchida kudzorera yako iPhone.
4. Back Up Your iPhone, Kana Unogona
Tisati taenderera mberi, zvakakosha kuve ne negadziriro yeparutivi pamusoro iPhone wako iCloud , iTunes , kana Tsvaga . Kana.
5. DFU Dzosera iPhone Yako
A DFU (mudziyo firmware update) kudzorera ndiyo yakadzika mhando iPhone kudzorera. Chii chinoita kuti DFU idzorere zvakasiyana kubva kune imwe yakajairwa kudzoreredza uye yekudzoreredza modzo Firmware ndiyo chirongwa chinodzora mashandisiro anoita Hardware pane yako iPhone.
Webhusaiti yeApple haina mirayiridzo yekuti ungaita sei DFU kudzoreredza, nekuti yakawanda nguva inodarika. Ndanyora chinyorwa chinotsanangura chaizvo maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi uye ita DFU kudzoreredza . Kana izvo zvikasagadzirisa dambudziko, dzoka kuchinyorwa chino kuti udzidze izvo zvaunogona kusarudza.
Nezve Hardware Matambudziko
Sezvatakakurukura, yako iPhone iri kuramba yakanamatira kumwe kunotanga maitiro. Paunovhura yako iPhone, chimwe chezvinhu zvekutanga zvazvinoita iko kukurumidza kutarisa kweako Hardware. Chaizvoizvo, yako iPhone iri kubvunza, 'processor, uripo here? Kugona! Ndangariro, uriko here? Kugona!'
Yako iPhone haizoshanduke kana chakakomba Hardware chikamu chikatadza kutanga, nekuti icho haikwanise batidza. Kana yako iPhone yakakuvara nemvura , pane mukana wakanaka waunoda kuti ugadziriswe kugadzirisa dambudziko iri.
6. Kugadzirisa Sarudzo
Kana iwe wakatora ese mazano ari pamusoro uye Apple logo iri zvakadaro yakanamatira pane yako iPhone skrini, inguva yekuigadzirisa. Kana iwe uri pasi pevimbiso, Apple inofanira kuvhara kugadzirisa kana hapana kumwe kukuvara. Nehurombo, kana iwe watora mazano angu pamusoro uye yako iPhone ichiri isingashande, imwe nzira yemvura kana kukuvara kwemuviri ingangove yekukanganisa.
Kana ukasarudza gadzirisa yako iPhone kuburikidza neApple , ivo vangangoda kutsiva yako iyo kugadzirisa dambudziko iri. Kazhinji, iyo logo yeApple inonamira pachiratidziro nekuda kwedambudziko neiyo iPhone yako logic board, uye icho hachisi chinhu icho Apple inogona kuchinjanisa kuchikamu chitsva. Kana iwe uchitsvaga sarudzo isingadhuri, Pulse iri pane-inoda kudiwa sevhisi inoita basa remhando yepamusoro.
iPhone: Haisisiri Yakanamira Pane Iyo Apple Logo
Ndinovimba, panguva ino iPhone yako yakanaka senge nyowani uye haufanire kutarisana nedambudziko iri zvakare. Takakurukura zvinoverengeka zvikonzero nei Apple logo inogona kunamatira pane skrini ye iPhone yako, uye mhinduro dzakasiyana dzinoshanda kune yega yega.
Iri idambudziko iro risingadzoke mushure mekugadziriswa - kunze kwekunge paine dambudziko rehardware. Ndiri kufarira kunzwa kuti iyo logo yeApple yakanamatira sei pane yako iPhone pakutanga uye kuti wakazvigadzirisa sei muchikamu chemashoko pazasi.